Khmelnytsky amandla enuzi - ingenye amabhizinisi ngobukhulu e-Ukraine. Ngaphezu kwalokho, Ububanzi bemisebenzi yayo - amandla enuzi isivele ngalo lufuna ukuba sibe nesimo sengqondo wemfanelo futhi ngokucophelela umsebenzi ukuhlela. Ukuqaphela ubungako balokhu amandla "silo" iqala ukuza kancane kancane, ne ushona umlando ekudalweni izimpiko zaso nokuphila. Nje yokuthi kancane: ngenkathi esiteshini kwalesi sigodi, elalisendaweni eduze, ngokwesaba lo dolobhana zakhula Neteshin eyakhelwe inhlabathi engeyinhle kakhulu. Yini Nokho, akuvimbeli kuye ngempumelelo ukufeza umsebenzi wabo yokunikeza izimpilo izinkulungwane eziningi iziteshi nemindeni yabo. Shono bethi Khmelnytsky amandla enuzi - kuba inkanyezi bhá e le ngamandla enuzi umkhakha Ukraine. Lesi sihloko kufanele kusetshenzelwe.
Konke lokhu kwaqala ngo-1971. Nakuba, uma ubheka kancane ezijulile, ngisho kancane ekuqaleni. Iqiniso liwukuthi ngaleso sikhathi eSoviet Union siswele umkhakha ugesi kule ndawo. Ngaphezu kwalokho, yena wadlala indima kanye nenqubomgomo - ukusondela ukuba umngcele avunyelwe ukusebenzisa iphrojekthi kwi international ugesi ukuhweba. Nokho, ukuze kufezekiswe kwaba isithiyo esikhulu - ukuntuleka efanelekayo fuel zemvelo ezifakwa eseduze, lapho kwakuyoba lula ukukhonza khona impahla njengoba zokusetshenziswa for zokukhiqiza. HPP kude kuye igxile kwezinye izifunda, babe izingqinamba lobuchwepheshe ukuthi kungenzeka isizukulwane ezengeziwe futhi ayikwazanga akha nesidingo esikhulu sezindawo ugesi. Futhi baba nethemba ukuthuthwa uphethiloli nezinye izingxenye zezwe akuzange kumenze injabulo. Ngakho-ke, kwanqunywa ukuba kwakhiwe isikhungo esiphehla ugesi wenuzi engxenyeni esentshonalanga ye-Ukraine.
Khmelnytsky amandla enuzi - isibonelo esivelele isibindi abakhi bakwazi esingenakuqhathaniswa sokubambisana kwamazwe omhlaba. Yakhiwa ende iminyaka eyishumi, kuhlelwe umthamo - 4,000 MW, okwakukhona ukukhiqiza ezine VVER-1000.
Yaqala ukwakhiwa yayo nge iqembu elincane labantu ayisithupha ngubani yayinelungelo eyodwa ngesikhathi (!) Bulldozer, elilodwa (!) Backhoe kanye nezimoto ezimbalwa. Futhi kwaba khona-ke, lapho nganikezwa umsebenzi: kusuka ekuqaleni ukwakha isikhungo esiphehla ugesi wenuzi futhi edolobheni for the Atomic! Yiqiniso, eminyakeni elandelayo ukwakhiwa ukhulile, njengoba eSoviet Union bakwazi ukuhlela nokwakha izindawo ngendlela enkulu. Ingxenye enkulu e inqubo ukuthatha abakhi bevela eHungary, ePoland, eCzechoslovakia. Futhi yayakhiwe unembeza, singasho yini kangaka imali njengoba intshiseko. Nokho, into yesikhathi esidlule.
Manje Khmelnitsky NPP ahlangabezana nobunzima ezinkulukazi ukugcinwa ofanele ezanele ezingeni lobuchwepheshe. Futhi lokhu, naphezu kwabantu umxhwele 9% - njengoba ugesi e amandla ngokuphelele "pie" Ukraine. Nokho, noma yini ngenhloso yokufihla - manje konke amandla ezikhungweni zenuzi Ukraine uhlangabezana nezinkinga ezifanayo ngenxa uthando oluqinile "Energoatom" emkhakheni zenuzi Russian.
Doesnt ugqozi injabulo kanye okuthunyelwe yakamuva kusukela iziphathimandla ukuthi imali ukuze kuphelele ukwakhiwa noma 3rd futhi 4th amandla amayunithi akukho.
Nokho, esikhathini esizayo, kuyinto efiselekayo bheka babe nethemba. Mhlawumbe Khmelnitsky NPP bese ulinda isikhathi entsha yokuchuma.
Psycho - ubani lo? Personality Kwemikhuba: Izimpawu, Ukwelashwa, Izinhlobo
Lviv emahostela Sibutsetelo